China Anti Blue Light 1.61 MR-8 fahitana tokana optika lantina HMC sy mpanamboatra | Kingway
Index Diamater Coating UV lanja
1:61 MR-8 HC, HMC, SHMC UV420
Monomer Transmission Abbe sanda Tanjon'ny herinaratra
MR-8 0,97 42 0.00 ~ + -15,00 / 0,00 ~ -6,00
Lensa tapaka UV420.
--- Ny teknolojia UV + 420cut dia manala tsy ny UVA sy UVB ihany, fa ny hazavana hita maso ihany koa (hazavana HEV) 400nm-420nm.
1. Ny solomaso voapaika manga dia afaka manakana ny karazana fitaovana elektronika rehetra, ny jiro LED hazavana fohy amin'ny alàlan'ny onja fohy alefa hanalefaka ny maso ateraky ny hazavana manga sy ny soritr'aretina tsy mahazo aina hafa.
2. Ny solomaso voapaika manga dia afaka mampihena ny fiantraikan'ny hazavana manga amin'ny tsiambaratelon'ny melatonin amin'ny alina, amin'ny lafiny sasany hanatsarana ny torimaso.
Previous: Blue Cut 1.56 mandroso multi coatin lalantsara fohy 12 + 2mm solomaso optika
Manaraka: Anti Blue Light 1.67 MR7 ASP UV420 fahitana tokana optika HMC
1.61 Mr8 Lensa fanapahana manga
1.61 Mr8 Lensa optika
1.61 Lens Grey Photochromic Grey mihodina
1.56 PhotoGray Tanjona fahitana fahitana anti biru l ...